Fitsarana heloka ara-toekarena, vola, hetra : atao izay hanilihana an-dRavalo sy Rajoelina amin’ny fifidianana | NewsMada
Fitsarana heloka ara-toekarena, vola, hetra : atao izay hanilihana an-dRavalo sy Rajoelina amin’ny fifidianana
Par Taratra sur 13/12/2016
Hatramin’izao, isisihan’ny fahefana mpanatanteraka hatrany ny fampandaniana eny anivon’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna momba ny fitsarana manokana misahana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra. Atao izay hanalihana an-dRavalomanana sy Rajoelina amin’ny fifidianana.
“Mbola betsaka ny zavatra tokony hojerena momba io fitsarana manokana io. Raha ny lalàna, tsy natao hijerena tavan’olona. Tsy mba toy izany io volavolan-dalàna io, fa hita miharihary na amin’ny fanazavana ny antonantony aza fa misy olona tiana hosakanana.”
Io indray ny nambaran’ny depiote avy amin’ny Mapar, Razanamahasoa Christine, momba ny fitetehan’ny fahefana mpanatanteraka hanao amboletra ny fampandaniana hatrany ny volavolan-dalàna momba ny fananganana fitsarana manokana hisahana ny fandikan-dalàna ara-toekarena, vola, hetra.
Efa nolavin’ny maro anisa tamin’ny tsangan-tanana teny anivon’ny Antenimierampirenena, Tsimbazaza, ny 30 novambra lasa teo, ny handinihana io volavolan-dalàna io.
Hasiana io fitsarana manokana io izay hahazoana manapaingotra an’ilay olona kendrena manokana. Heloka ara-toekarena, vola, hetra no anaovan-dry zareo azy: ny mpandraharaha izany no kendrena. Nefa na tsy mpandraharaha aza, karazana kendrena amin’io.
Manao izay fomba rehetra handresena amin’ny fifidianana ny fifidianana
Na tsy nilaza mivantana aza io depiote avy amin’ny Mapar io, izay mpahay lalàna ihany koa: efa fantatry ny rehetra fa ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc, sy ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Rajoelina Andry, no tetehin’ny fitondrana sakanana tsy ho kandidà amin’ny fifidianana 2018.
Izay no hamerena ny fitsarana ireo heloka ara-toekarena sy fampiasam-bola ary fandovan-ketra ho tamin’ny krizy, taona 2009, ka hatramin’ny fiafaran’ny Tetezamita, taona 2013. Efa olana sahady izay, mahabe adihevitra: natao hisahana ny raharaha teo alohan’izay ivoahany ve ny lalàna sa ampiharina manomboka amin’ny fankatoavana azy ho manankery eto amin’ny tany sy fanjakana? Misy ny manahy ny hisian’ny kolikoly amin’ny fampadaniana amboletra io volavaoalan-dalàna io.
Manao izay fomba rehetra handresena amin’ny fifidianana, taona 2018, ny mpitondra? Toy tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna, jolay 2015, sy ny fifidianana loholona, desambra 2015. Tsy hita izay hoe fanjakana tan-dalàna amin’izany? Ahina ny mbola hitrangan’ny zavatra sampontsampona sy zava-doza noho izany rehetra tena antomotra sy hirosoana ny fifidianana…